COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဧပြီ ၁၃ ရက်နေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းတွင် မြို့သစ်မြို့. ထန်းတပင်ကျေးရွာမှ COVID-19 ရောဂါပိုးရှိသူ(ကျား) တစ်ဦးတွေ့ ရှိ ~ Myaylatt Daily.
COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဧပြီ ၁၃ ရက်နေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းတွင် မြို့သစ်မြို့. ထန်းတပင်ကျေးရွာမှ COVID-19 ရောဂါပိုးရှိသူ(ကျား) တစ်ဦးတွေ့ ရှိ
9:40 AM သတင်း No comments
မြို့သစ် ဧပြီ ၁၄
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မြို့သစ်မြို့နယ် အမှတ်၁ အခြေခံအထက်တန်းကျောင်းတွင် မြို့သစ် မြိနယ် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ အဖွဲ့မှကြီးကြပ်ကာ မြို့နယ် အဆင့်ကျန်းမာရေးစင်တာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး ပြည် တော်ပြန်များအတွက် Facility Quarantine ကန့်သတ်ထားရှိရာနေရာတွင် ယမန်နေ့ နေ့လည်(၃)နာရီအချိန်က ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးရှိ/မရှိကို ထိုင်းနိုင်ငံမှပြန်လာသည့် ကန့်သတ်ထားရှိသော ၁၄ ဦးအား မြို့နယ်ကျန်းမာ ရေးစင်တာသို့ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆရာဝန် ဒေါက်တာရဲလင်းကျော် နှင့် မြို့နယ်ဓါတ်ခွဲမှူး ဒေါ်ဥမ္မာတို့က လည်ချောင်းတို့ပတ်နှင့်နာခေါင်း တို့ပတ် တို့ကို ယူပြီး အမျိုးသားဓါတ်ခွဲခန်းရန်ကုန်သို့ ပိုးရှိ/မရှိ ဓါတ်ခွဲအတည်ပြုစစ်ဆေးရန် ပေးပို့ခဲ့ ကြောင်း မြို့နယ်ကျန်းမာ ရေးစင်တာသို့ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
အဆိုပါ ပိုးတွေ့ရှိခဲ့သူမှာ မတ်လ ၂၉ ညနေ၅နာရီ အချိန်တွင် ပွင့်သစ်စရတနာဖြင့် မြဝတီမှရန်ကုန် ရန်ကုန်မှပြည် အောင်လံ/တောင်တွင်းကြီး မြို့သစ်သို့ မှန်လုံကာဖြင့်၃၀-၃-၂၀၂၀ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင်ရောက်ရှိခဲ့ရာ မြို့သစ် အထက(၁)တွင် Facility Quarantine ကန်သတ်ထားရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဆက်လက်၍ COVID-19 ရောဂါတွေ့ရှိသူ( ကျား) အသက် ၃၁----မှာကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လျက်တွေ့ရှိရပြီး မြို့သစ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားကြောင်းနှင့် Facility Quarantine စောင့်ကြည့်ကြသူ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ကိုဗစ် ၁၉ ကာကွယ်ထိန်းချုပ် ကုသရေးကော်မတီအဖွဲ့ကိုလည်း Facility Quarantine ဆောင်ရွက်သွားခြင်းကိုလည်း တိုင်းညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု မြို့နယ်ကျန်းမာ ရေးစင်တာ၊ မြို့သစ်မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။